မြန်မာ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားဖို့ SCG ရဲ့ ကူညီမှု | Mizzima Myanmar News and Insight /* TA: Added on nov-22-2019 */
မြန်မာ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားဖို့ SCG ရဲ့ ကူညီမှု
အမြင်အာရုံဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ဘဝရဲ့ အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ မျက်စိစောင့်ရှောက်မှုနည်းလမ်း အကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိလာရင် သင်ချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း စောင့်ရှောက်နိုင်မှာပါ။
အာဆီယံဒေသမှာ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ စီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘိလပ်မြေနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းလုပ်ငန်းပိုင်း၏ ထိပ်တန်းလုပ်ငန်းဖြစ်သော SCG သည် ကျောင်းသားများအား ပညာသင်ဆုများ ထောက်ပံ့ပေးနေသည့် SCG Sharing the Dream နှင့် တိမ်မျက်စိရောဂါဖြစ်ပွားနေသော လူနာရှင်များအား အခမဲ့ မျက်စိခွဲစိတ်မှုကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ထောက်ပံ့ပေးနေသည့် “ SharingaBrighter Vision” Campaign ကဲ့သို့သော ဆောင်ရွက်ချက်များစွာကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကတည်းမှစတင် ၍ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အထူးသဖြင့် ပထမဆုံး ဘိလပ်မြေစက်ရုံ တည်ရာဖြစ်သည့် မွန်ပြည်နယ်၏ လူနေမှုအဆင့်အတန်းကို မြှင့်တင်ပေးရန် ကူညီပေးနေပါသည်။
SCG သည် သက်ကြီးရွယ်အိုများ မျက်စိတိမ်ဖြစ်ပွားမှု နှုန်းမြင့်တက်လာခြင်းနှင့် လူပေါင်းများစွာအတွက် ဆရာဝန် နှင့် ရောဂါရှာဖွေနိုင်မှု အခွင့်လမ်းကင်းမဲ့နေခြင်းများကြောင့် ယခုအစီအစဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အတွင်းတိမ်သည် ရှင်သန်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ခြင်း အပါအဝင် နေ့စဉ် ဘဝများကို ကြီးမားစွာထိခိုက်စေနိုင်သည်။ လစ်လျူရှူလိုက်ပါက မျက်စိကွယ်စေနိုင်သည့် အမြင်အာရုံ မှုန်ဝါးခြင်းများ အစရှိသဖြင့်ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးခြင်းသည် သူတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် အခြားသူများစွာအတွက် အခွင့်အလမ်းများစွာအား တားဆီးနိုင် သည်ကို SCG ကသတိပြုမိပါသည်။ အတွင်းတိမ်အကြောင်း၊ အတွင်းတိမ်လက္ခဏာများ၊ ရောဂါစစ်တမ်း၊ SCG ၏ SharingaBrighter Vision Campaign မှရရှိနိုင်သည့် လက်ရှိကုသမှု နည်းလမ်း SCG Campaign တွင် ကုသမှု ခံယူအပြီး အခြေအနေများ စသည်ဖြင့် မျက်စိစောင့်ရှောက်မှု အသိပညာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာများ အပါအဝင် Campaign အကြောင်းအား အပိုင်း (၄) ခုုဖြင့် တင်ဆက်ထားသည့် သတင်းမှတ်တမ်း တစ်ခုလည်းပါ၀င်မည်ဖြစ်သည်။
SCG ၏ SharingaBrighter Vision Campaign အကြောင်းအပိုင်း (၄) ခုကို MRTV-4 မှ Woman-to-woman အစီအစဉ်တွင် စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။
1st Episode: SUN5November @ 10:15 am
2nd Episode: SUN 12 November @ 10:15 am
3rd Episode: SUN 19 November @ 10:15 am
Last Episode: SUN 26 November @ 10:15 am
Eye sight is the most important part of our life. Getting to know more about how to take care of your eyes and you can also take care of your beloved ones.
SCG, leading ASEAN sustainable conglomerate as well as leading in cement and building materials in Myanmar, helps to increase the living standard in Myanmar especially in Mon State, where first cement plant is located, by doing many activities since 2012 such as SCG Sharing the Dream which provide scholarships to students and now “SharingaBrighter Vision” campaign which is to provide free surgery to patients with cataracts since 2015. SCG brought the campaign to Myanmar due to its high rates of elder people suffering from cataracts and the reason why being many people not having the opportunity to diagnosis with the doctors. Cataracts can affect hugely in daily lives including living and working. If ignored, the vision will be blurred which can then lead to blindness.
SCG aware that loss of vision will obstruct many of opportunities both for themselves and others. There is alsoadocumentary about this campaign with4episodes including topics related to eye care knowledges such as cataracts, symptoms of cataracts, diagnosis, current treatment available in SCG’s “SharingaBrighter Vision” campaign, after life of receiving treatment from SCG’s campaign and etc. Stay tune to these 4-episodes about SCG: SharingaBrighter Vision campaign in Woman-to-woman program at MRTV-4.
For more information: https://www.facebook.com/SCGBrandMyanmar/?brand_redir=285116394953032